मदिरा व्यवसायीले मदिरा पसल खोल्न दिन माग, नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी, कहिले खुल्छ त? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार मदिरा व्यवसायीले मदिरा पसल खोल्न दिन माग, नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी,...
मदिरा व्यवसायीले मदिरा पसल खोल्न दिन माग, नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी, कहिले खुल्छ त?
वीरगंजका मदिरा व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्न दिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्।
वीरगंजमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणतर्फ गइरहेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मदिरा व्यवसाय संचालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन्। नेपाल मदिरा व्यवसायी संघ वीरगंजका अध्यक्ष रामआधार सर्राफले करिब दुई महिनाको निषेधाज्ञाले व्यापार चौपट भएको बताउँदै अरु क्षेत्रजस्तै मदिरा पसल खोल्न दिनुपर्ने बताए।
वीरगंजमा करिब ९० वटा थोक मदिरा बिक्रेता र २५ सय खुद्रा बिक्रेता छन्। निषेधाज्ञाकै कारण पहिला बिक्री भएको मदिराको करोडौ रुपैयाँ उधारोनै रहेको सर्राफले बताए।
वीरगंजमा विहान १० देखि ५ बजे सम्म खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री बिक्री गर्न समय तोकिएको छ। व्यवसायीले मदिरा व्यवसाय नखोले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिए।
पटकपटक व्यवसायीको टोली पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेसँग समस्या राख्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार असार १५ गतेपछि खोल्न दिने तयारी भइरहेको छ।
Previous article२ जना मोटरसाइकल जलाउनेमा पक्राउमा परेको
Next articleरगत किन रातो हुन्छ ? किन अरु नै रङ्ग भएन, यस्तो छ कारण